शेयर बजार नारीहरुको लागी सहज क्षेत्र हो - Enavanari
शेयर बजार नारीहरुको लागी सहज क्षेत्र हो
अध्यक्ष, नेपाल पु“जीबजार लगानीकर्ता संघ
पुँजीबाजरको क्षेत्रमा कसरी आकर्षित हुनुभयो ?
२०६५ सालतिरको कुरा हो, मलाई एउटा सहकारीमा प्रवन्धक पदका लागी कुरो आयो । मैले ठीक छ, म गर्छु भनें । तलब पनि आकर्षक नै थियो । पढ्ने क्रममा विद्यार्थीसँग उति सारो पैसा त हुँदैनथ्यो तर मैले जागिर खान थालेकीले पैसासँग खेल्न थालें । ठ्याक्कै मिति त सम्झिन्न त्यसैताका कमर्सियल बैंकहरुले सर्वसाधारणलाई जारी गरेको साधारण सेयर निस्काशन बारेको सूचना पत्रिकामा पढें । उसबेला आईपीओ भर्नेको उत्तिसारो चाप नभएर होला, मलाई दुबै बैंकमा तीन, तीन शय कित्ता सेयर पर्यो । मेरो सेयरसम्वन्धी ज्ञान यसबेलासम्म थिएन । तैपनि जुनसुकै कम्पनीको साधारण सेयर खुल्थ्यो, मैले भरेकै हुन्थें । यसरी सेयर बजारमा मेरो प्रवेश भयो ।
एउटी नारीलाइ यो स्थान सम्म आउन कत्तिको संघर्ष गर्नु पर्यो ?
म जुन रूपमा यहाँसम्म आएँ, यसवीचमा धेरै नै बाधाहरुको सामना गरे । अझै कति आउने हुन् थाहा छैन । पाइला पाइलामा मैले नारी हिंसा नसहेकी पनि हैन, आँखामा सागर र मुटुभित्र सुनामी उर्लिएर मलाई सहन निक्कै गाह्रो पनि नभएको हैन । साँच्चै बिक्षिप्त भएँ म तर सानैमा मृत्युसँग जुधेकी हुनाले सबै समस्यासँग जुध्न सक्ने सामथ्र्य ममा अझै बाँकी थियो र बिध्न वाधा झेल्दै गए । मेरो आज भन्दा १५ वर्ष पहिला ओपनहर्ट सर्जरी गरी मुटुका दुई भल्भहरु फेरिएका छन् । जनमानसमा मुटुमा समस्या हुनेहरूको आत्मबल कमजोर हुने जुन सोच छ, त्यसलाई म गलत सावित गर्न सक्छु । किनकि, मैले कहिल्यै हिम्मत हारेकी छैन । वरु मैले भरखर भरखर वामे सर्दै गरेको नेपाली पूँजीबजारलाई नेपालका कुना कन्दरा, दूरदराज समेतमा पु¥याउँछु भनेर अग्रसर हुदै आएकी छु ।
पुँजीबजारको क्षेत्रमा महिलाहरुको उपस्थिति अत्यन्तै न्युन रहेको छ, यसमा महिलाको आकर्षण किन बढ्न नसकेको होला ?
हाम्रो बजारमा अझै पनि शेयर साक्षारताको कमी छ । बजारका बारेमा ज्ञान नहुँदा पुँजी भएर पनि शेयर बजारमा आउन चाहने लगानीकर्ता पनि हच्किनु पर्ने स्थिति छ । बजारमा सेयर परामर्शदाताहरुको व्यावस्था छैन । त्यसैले लगानीकर्तालाई बढीभन्दा बढी सेयर साक्षारतको आवश्यकता छ । बजारको आकार र आकर्षणमा आएको वृद्धिसँगै पुँजी बजारमा भित्रिन चाहने नयाँ लगानीकर्ताहरु र महिलाको संख्या पनि पछिल्लो समय बढेर गएको छ ।
शेयर बजारलाई सामान्य मानिसले बुझ्न नसक्ने क्षेत्रको रुपमा पनि लिइन्छ नि ?
मेरो अनुभव भिन्न छ । यो मार्केटमा काम गर्न त्यस्तो धेरै पढे लेखेको हुनु पर्दैन । आठ कक्षा पास गरेको विधार्थीले पनि यति राम्रो काम गर्न सक्छ कि वरु एमविए पास गरेको व्यक्तिले पनि नम्वर कम पाउन सक्छ, फेल हुन सक्छ । हामीले शेयर मार्केटको ईतिहास हेर्ने हो भने यहाँ यति धेरै पढेका मानिस, समझदार मानिस, ठूला मानिस र धुरन्धर मानिसले यो मार्केटमा ठूलो ठूलो गल्ती गरेका छन् । चङ्गा उडाउनलाई तपाई संग जतिनै वढी ज्ञान भए पनि हावा नभई चङ्गा उड्दैन, त्यसै गरी शेयर वजारमा जस्ले जति नै ज्ञान हासिल गरेपनि माहोल नवनी सेयर वजार माथि जाने होईन । शेयर मार्केटमा पढेलेखेका मानिस मात्र सधंै सफल हुदैनन् । शेयर मार्केटमा हरेक लगानीकर्ता अन्दाज लगाएर काम गर्ने गर्छन् । यो मार्केट भन्दा ठूलो कोही हुदैन । यो मार्केटमा प्रववलिटी हुन्छ तर सर्टेनलिटी हुदैन ।
शेयर बजारमा सधैं उतारचढाव आइरहन्छ, शेयर बजारलाई प्रभाव पार्ने तत्वहरु के के हुन् ?
शेयर बजारलाई प्रभाब पार्ने प्रमुख तत्व भनेको बैंक तथा बित्तीय संस्थाले दिने ब्याज दर हो । बैंकमा पैसा राख्दा ब्याज धेरै पाईन्छ भने लगानीकर्ताले शेयरमा लगानी गर्दैनन् । अर्को कुरा शेयर कर्जामा ब्याज महंगो हँुदा पनि यो बजारलाई प्रभाव पर्दछ साथै देशको राजनीतिक अवस्था, तरला, ऐन नियमहरु, नियामक निकायबाट समय समयमा जारी हुने निर्देशनहरु लगायतले समेत यो बजारलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।
कालोबजारीको नाममा, प्यानको नाममा, भ्याटको नाममा लगानीकर्तालाई किन त्रसित गरिन्छ ?
यो एउट प्रपोगण्डा मच्चाएर मार्केटलाई तलमाथी गराउने खेल मात्र हो । म त के भन्छु भने कालो बजारीको पैसा शेयर बजारमा आउनै सक्दैन किनकी सेयर कारेबार बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै गरिन्छ । व्रोकर अफिसमा क्यासको लेनदेन नै हुदैन । रह्यो प्यान र भ्याटको कुरा यो पनि केही दिन पहिले टुड्गो लागिसकेको हुनाले अब प्यान र भ्याटको भूत देखाउनुमा कुनै तुक छैन ।